သင်၏ Wordpress ဆိုက်တွင်ပြင်ပသတင်းများတင်ခြင်း Martech Zone
သင်၏ WordPress ဆိုက်တွင်ပြင်ပသတင်းများတင်ခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 17, 2008 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Douglas Karr
အချို့သောလူများက၎င်းကိုမသိရှိကြသော်လည်း WordPress သည်အခြား feeds များထုတ်လွှင့်ခြင်းကို box ၏အပြင်အဆင်များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဘလော့ဂ်တခုကိုဘယ်လိုထုတ်လွှင့်မလဲဆိုတာကိုအရင်ကငါရေးခဲ့ဖူးတယ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော search engine ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် site ၏ keyword သိပ်သည်းမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည် - သို့သော်ဤအရာသည် WordPress အတွင်း၌မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
WordPress သည် Magpie နှင့် RSS Cache ကို၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားသည် ရရှိနိုင်သော function ကို fetch_feed:
fetch_feed - အလိုအလျောက်ယာယီသိမ်းဆည်းထားသည့် URL မှ RSS feed တစ်ခုကိုရယူပါ (rss_functions.php တွင်ပါ ၀ င်သည်)
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ဟာမင်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပို့စ် ၅ ခုကိုသင့်ဆိုဒ်သို့ထည့်သွင်းပါ (ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့) DK New Media):
get_item_quantity (5); $ items = array_slice ($ rss-> get_items, 0, $ maxitems); endif; ?>  ပစ္စည်းမရှိ '; အခြား ($ item များအဖြစ် $ ပစ္စည်းများ) foreach:?> get_permalink() ); ?>'
title="<? php printf (__ ("Posted %s', 'my-text-domain' ), $item->get_date ('ညဘဏ္Yာရေးနှစ်: ဆ: ကိုယ့်တစ် ဦး')); get_permalink() ); ?>'
သင်၏ WordPress template (Design> Theme Editor) ကိုတည်းဖြတ်ပြီးသင်ထုတ်ဝေလိုသည့်ကုဒ်ကိုထည့်ပါ။ Feeds တွေထုတ်ပေးမယ့် sidebar widget တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Cisco သည် I-Prize Telepresence: မေလ ၆ ရက်
ဧပြီ 17, 2008 မှာ 8: 27 AM
အခြားသူများကိုသာမကသင်ကိုယ်တိုင်ပါအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ ငါခဏမှာဒီအမှုကိုပြုပါတယ် SMJdesign အားလုံးကတည်းကငါငါ့လေးဘလော့ဂ်များစုစည်းသောဘလော့ဂ်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက။ ငါသုံးတာကိုကြိုက်တယ် FeedList ပလပ်အင် built-in RSS လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏။
၎င်းကိုသင်သည် Twitter sideblog သို့မဟုတ် RSS feed ရှိသည့်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဧပြီ 17, 2008 မှာ 9: 30 AM
စက်ဝိုင်းမှာမင်းကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ built-in အင်္ဂါရပ်များအပေါ်မှာ plugin ၏အားသာချက်များကိုစပ်စု? ဒါကရိုးရိုးရှင်းရှင်း interface လား။ ငါ cache ကို internal function ကိုသို့ built သောအချက်ကိုကြိုက်တယ် - မြင့်မားသောအသံအတိုးအကျယ်ရက်ပေါင်း / က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်, ဒါကအဆင်သင့်အသုံးဝင်သောနိုင်
ဧပြီ 17, 2008 မှာ 2: 01 pm တွင်
တောက်ပ - ဤငါလိုအပ်ပါတယ်အတိအကျပါ! ငါ WP MU site တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေပြီးအဓိကဘလော့ဂ်ကိုဘလော့ဂ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်တစ်ခုဖြင့်စာမျက်နှာတစ်ခုပြသရုံသာလိုသည်။ အခုဆိုရင်ငါ RSS widget ကိုသုံးပြီး sidebar မှာထွက်ဆွဲထားဖို့ထက်ဂရပ်ဖစ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ပို့စ်တင်ရန်အတွဲနှစ်တွဲထည့်နိုင်သည်။
ဧပြီ 17, 2008 မှာ 3: 58 pm တွင်
ရယ်စရာကောင်းတာက WP site ကိုတခြားသူတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါ MagPie ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်ခဲ့တယ်။ WP မှသူများသည်တကယ်ကိုကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်မဟုတ်လား။